Shadow Fight22.0.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0.4 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Shadow Fight 2
Shadow Fight2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နာမည်ကျော် Facebook အဖို့နောက်ဆက်တွဲ 40 သန်းအသုံးပြုသူများနှင့်ဝင်တိုက်တပ်များ
အရိပ် Fight2RPG နှင့်ဂန္ထဝင်တိုက်ပွဲများတစ်လက်သည်း-ကိုက်ရောနှောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကိုသင်မရေမတွက်နိုင်အောင်သေစေလောက်လက်နက်နှင့်ရှားပါးလက်နက်အစုံနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်တပ်ဆင်နှင့် lifelike-ကာတွန်းကိုယ်ခံပညာနည်းစနစ်များစွာပါရှိပါတယ်ပေးနိုင်ပါတယ်! သင်၏ရန်သူတို့ကိုချေမှုန်း, နတ်ဆိုးအကြီးအကဲတွေအရှက်နှင့် Shadows ၏တံခါးပိတ်ဖို့ရန်တရှိစေသတည်း။ သင်က, ကန်လာကြတယ်, ခုန်ဖို့ကြာသောအရာကိုရှိသည်, အောင်ပွဲရန်သင့်လမ်းလျှော့ချသလား? ထွက်ရှာတွေ့မှတစ်ဦးတည်းသာလမ်းရှိပါတယ်။
- တစ်ဦးတို့ကအံ့သြ lifelike အသေးစိတ်ပြန်ဆိုမော်ကွန်းတိုက်ခိုက်ရေးပာသို့ကျဆင်း,
- delightfully အလိုလိုသိထိန်းချုပ်မှုနဲ့ All-အသစ်ကကျေးဇူးတင်သင်၏ရန်သူတို့ကိုဖျက်ဆီး
အထူးသဖြင့် touchscreen များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ interface ကိုတိုက်ခိုက်နေ။
- ဤ action- အတွက်ဆိုထားပါသည်နတ်ဆိုးတို့၏အပြည့်အဝကိုခြောက်ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာမှတဆင့်ခရီး
ထုပ်ပိုးတစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာ, စိတ်ဝင်စားဖွယ် storyline နှင့်အတူ adrenaline လောင်စာတိုက်ခိုက်ရေး RPG ။
- မော်ကွန်းဓားနှင့်အတူ nunchacku သင့်ရဲ့တိုက်လေယာဉ် Customize, သံချပ်ကာဝတ်စုံ, မှော်အင်အားကြီး,
အရိပ် Fight 2. စစ်တိုက်ရာတွင်စတင်ပါစေသော
Shadow Fight2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Shadow Fight2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Shadow Fight2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
mr-robot-games စတိုး 3.66k 5.39M
Shadow Fight2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Shadow Fight2အခ်က္အလက္
Release date: 2019-04-29 18:56:53
လက်မှတ် SHA1: 5D:40:D3:96:26:BE:11:2F:1C:52:95:A4:4B:66:4E:2D:E1:79:F6:BC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Kirill Korepanov
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Russia
Shadow Fight2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ